အသက် ၁၄နှစ်ကနေ ၄၆နှစ် အရွယ်ကြား ကချင်အမျိုးသမီးငယ်များ ရောင်းစားခံနေရ အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
အသက် ၁၄နှစ်ကနေ ၄၆နှစ် အရွယ်ကြား ကချင်အမျိုးသမီးငယ်...
22 มี.ค. 2562 - 11:28 น.
(၁) ကချင်အမျိုးသမီးငယ်တချို့ တရုတ်ပြည်ကို ဇနီးမယားအဖြစ်ရောင်းစားခံရ
စစ်ရှောင်စခန်းက ကချင်အမျိုးသမီးတွေကို ဇနီးမယားအဖြစ် တရုတ်ကိုရောင်းစားတာတွေရှိနေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch (HRW) ) က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
တရုတ် ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၁၄ နှစ်ကနေ အသက် ၄၆ နှစ် အကြား အရွယ်တွေများတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။
ပြန်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့ ပြောဆိုမှုအရ အရောင်းစားခံရသူတွေဟာ တရုတ်ဘက်က ကျေးရွာတွေကို ပို့ဆောင်ခံရပြီး အခန်းထဲ ချုပ်နှောင်ခံရ ၊ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိလာလို့ ကလေးမွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်း အလုပ်သမားလို တချိန်လုံး ခိုင်းစေခံကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာချိန်မှာလည်း ကလေးကို ချန်ထားခဲ့ရလို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်ကြုံရသလို လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ကြုံတွေ့ရတာတွေကို ထုတ်ပြောဖို့ အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာကို ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက လူကုန်ကူးခံရပြီး ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့ အမျိုးသမီး မိန်းကလေးငယ် ၃၇ ဦးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်းစားခံရတဲ့ အများစုဟာ သူတို့နေရပ်တွေမှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ လူမှုဘ၀ အခက်အခဲတွေကြောင့် ရောင်းခံကြရတာ ဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ကွင်းဆင်းရေးသားခဲ့သူ ဟေသာဘား (Heather Barr) က ပြောပါတယ်။
လူကုန်ကူးခံရမှု အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နေရာတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ၊ တရုတ်နဲ့ KIO (ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့) တို့ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသတွေက အာဏာပိုင်တွေ ပိုအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့ နဲ့ အစိုးရတို့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ထုတ်ပြန်
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (NRCP)က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ နဲ့ NCA အပစ်ရပ် လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံအပြီးမှာ တိုက်ပွဲတွေလျှော့ချဖို့ ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့ အတွက်ကြိုးပမ်းဖို့ ၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေး နည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ညှိနှိုင်းဖို့ စတဲ့ အချက်တွေပါဝင်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလတ်တလော တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရနဲ့ ရခိုင်တပ်မတော် သဘောထား ကွဲလွဲနေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရ သဘောထားကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန NRPC ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ရခိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ မည်သည့်အဖွဲ့ကို လက်ခံသည် လက်မခံသည် သဘောကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အဖြူရောင်နယ်မြေပါ။ အဖြူရောင်နယ်မြေကို လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ အခြေချဖို့ ကြိုးပမ်းခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရဘက်က ထိုက်သင့်တဲ့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ဆောင်ရွက်နေတာကို နားလည်သဘောပေါက်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလို့ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် လက်နက်ကိုင်ပြီး အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုနေမယ့် အစား နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းကို လာရောက်ဖို့လဲ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလို အစိုးရရဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်လာတဲ့ ရခိုင်တပ်မတော်က ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်က ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ရှိနေမှုကို တပ်မတော်ဘက်က လက်မခံတဲ့သဘောလို့ နားလည်တယ်။ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်တပ်မတော် တည်ရှိဖို့ဟာ ULA /AA ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်။ ရခိုင်ပြည်သူကို ရခိုင်တပ်မတော်ကပဲ အေးချမ်းဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် တာဝန်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၃) ဥရောပသမဂ္ဂကနေ ဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ဖို့ အချိန်ထပ်တိုး
ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေက ဥရောပ သမဂ္ဂကနေ ဗြိတိန်နှုတ်ထွက်မှု (ဘရက်ဇစ်) အတွက် အချိန်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေ အနေနဲ့ ဘရက်ဇစ် သဘောတူညီချက်ကို ဗြိတိန်လွှတ်တော်ရဲ့ အတည်ပြုချက် ယူဖို့ အချိန် နှစ်လ ရရှိပါတယ်။
အဲဒီသဘောတူညီချက်ကို လွှတ်တော်က အတည်မပြုနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနေနဲ့ အီးယူက နှုတ်ထွက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တခြားအစီအစဉ်တစ်ခုကို အဆိုတင်ပြဖို့ သီတင်းနှစ်ပတ်ပဲ အချိန်ထပ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပြီး မပြနိုင်ရင်တော့ အီးယူကနေ ဒီအတိုင်း နှုတ်ထွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဇာမေကတော့ အခုလို အချိန်နှစ်လ ထပ်တိုးပေးလိုက်တာကြောင့် ဗြိတိန်အနေနဲ့ လာမယ့် အီးယူရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အီးယူနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် မေတို့ ညှိနှိုင်းရရှိထားတဲ့ ဘရက်ဇစ် သဘောတူညီချက်ကို ဗြိတိန်လွှတ်တော်က နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပယ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ်မေက အခုလကုန်မှာ သက်တမ်းကုန်မယ့် ဘရက်ဇစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ အီးယူခေါင်းဆောင်တွေဆီကို တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဗလီ နှစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရမှု တစ်ပတ်ကြာ အနေနဲ့ ၂ မိနစ်ကြာ ငြိမ်သက်ဆုတောင်းမှု
(၄) နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တိုက်ခိုက်ခံရမှု နှစ်မိနစ်ငြိမ်သက် ဆုတောင်း
နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာတော့ ခရိုက်ချာ့ချ်မြို့က ဗလီ နှစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရမှု တစ်ပတ်ကြာ တဲ့အချိန်မှာ အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ ၂ မိနစ်ကြာ ငြိမ်သက်ဆုတောင်းမှု တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ယာစွန်းသေနတ်သမား ပစ်ခတ်မှု လုပ်ခဲ့တဲ့ အယ်လ်နောဗလီရှေ့က ပန်းခြံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒီပွဲကို လူထောင်ချီ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ခရိုက်ချာ့ချ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတွင်း ဗလီ နှစ်ခုမှာ သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုနေသူ အယောက် ၅၀ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
နယူးဇီလန် အစိုးရကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် သေနတ်သမားသုံးခဲ့တဲ့ ဆီးမီးအော်တိုသေနတ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး ရိုင်ဖယ်တွေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးတာ ပိတ်ပင်သွားမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဂျာဆင်ဒါ အာဒန်ကတော့ ဒီပိတ်ပင်မှုကို ဥပဒေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး အမြန်ဆုံးလုပ်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းအပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ဒီပွဲကို ဝန်ကြီးချုပ် ဂျာဆင်ဒါ အာဒန်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။